MKV magaabay: Sida loo jar MKV Files (Windows 8 ka mid ah)
> Resource > Video > Sida loo jar MKV Files (Windows 10 ka mid ah)
Sida loo jar MKV Files (Windows 10 ka mid ah)
"Waxaan 2700 MB live files riwaayad qaab MKV iyo u baahan tahay inaad soo gooyay song walba si gooni gooni ah oo uu gubaa galay DVD ah in ciyaaryahan kasta DVD ka akhrisan kartaa. Su'aashaydu waa sida loo googooyeen faylasha gaar ah tayada dhawrsan. Qof kasta oo kaa caawin kara ? "
Uu dhib la mid ah nin ee kor ku xusan? Ha welwelin. In this article, waxaad ku baran doonaa sida loo gooyay files MKV dhowr qaybaha muuqan iyo effortlessly (Windows 10 ka mid ah). Si aad u gooyay files MKV, waxaad u baahan tahay oo ah magaabay MKV maarmaan at farahaaga. Halkan, waxaad si toos ah sida MKV awood badan video magaabay ah ka heli kartaa. Just download iyo rakibi this smart Wondershare Video Converter ( Video Converter u Mac ), ka dibna raac tutorial hoos ku dhammayn talaabada shaqo cut MKV talaabo.
1 dejinta file MKV ah in magaabay MKV this
Waxaa jira laba siyaabood oo dabacsan si ay u dajiyaan file MKV aad kombiyuutar si ay this video MKV magaabay. Mid ka mid ah waa in guji "Add Files" doorasho inay ku shuban file MKV aad rabto in aad ka, kan kale waa in la jiidayo file MKV in ay tani app ee Murayaad bidix.
2 files Goo MKV
Si aad u gooyay file MKV ah inay clip aad rabto, waxaad u baahan tahay riix badhanka Edit ku item bar video ugu horeysay. Markaas, furmo pop-up sixiddiisa ah, waxaad u baahan tahay in ay u kala horreeyaan jiidi labada sliders in bilowga iyo dhamaadka video clip aad rabto. Ugu dambeyntii, riix OK si aad u comfire.
Fiiro gaar ah: In si ay u kala soocaan clips kala duwan, si fiican iyaga aad magaca lahaa. Si aad u samayn, kaliya clip magaca faylka in bar video shayga, ka dibna ku qor magaca faylka aad rabto in aad ka.
3 dhoofinta MKV hal clip ah
Hit icon qaab on Murayaad Qaabka Output ah, MKV xulo qaab sida wax soo saarka, ka dibna riix "Beddelaan" button rukun ee hoose-saxda ah ee interface ugu weyn ee ay u dhoofiyaan file cusub MKV. Ka dib markii in, waxa aad furan kartaa folder saarka this app ee si aad u ogaato file cusub.
Mar kale iyo mar kale soo dejinta faylka MKV asalka ay ku soo celiyaan shaqada cut iyo dhoofinta. Sidaas, waxaad yareyn kartaa MKV galay clips badan iyo siday u kala horreeyaan iyaga ku badbaadin galay file fudud.
Fiiro Gaar ah: Tani magaabay MKV video aad bixisaa hawlaha tafatir dheeraad ah, sida beddesha, dalagga, midowdo files MKV, ku dar horyaalka, video saamayn iyo watermark iwm Hel talooyin dheeraad ah oo ka: Edit files MKV >>
Sida loo dar Photos in Audio
Sida loo tir-Waji baxay Video
Sida loo Edit AVCHD Files
Top 5 talooyin aad u baahan tahay ogaato oo ku saabsan taariikhqorihii screen OBS
Top 10 Music Videos Most Aragti
Sidee Baan U beddelaan M2T Video An File?
NBC Downloader: Sida loo Download NBC videos